Ny Huawei P40, P40 Pro ary Mate 30 Pro dia mahazo ny fanavaozana maharitra ny EMUI 11 | Androidsis
Vao tsy ela akory izay i Huawei dia namoaka fanavaozana rindrambaiko vaovao izay kendrena amin'ity indray mitoraka ity amin'ny P40 sy P40 Pro. Ny Mate 30 Pro dia mendrika an'ity fonosana firmware ity ihany koa, izay mifanitsy amin'ny EMUI 11 ao amin'ny kinova misy azy ary tsy misy lesoka.
Satria amin'ny fiteny Tiorka ny changelog fanavaozana, azontsika atao tsara ny milaza fa ny fanavaozana ny OTA dia miparitaka any Torkia sy firenena vitsivitsy any Moyen Orient. Ho tonga manerantany izy avy eo, saingy mety handany andro na herinandro vitsivitsy vao hanaovana izany.
Stable EMUI 11 dia tonga amin'ny Huawei P40, P40 Pro ary Mate 30 Pro miaraka amin'ny fahaleovan-tena bebe kokoa amin'ny Android
Araka ny lazain'ny vavahady GSMArena tatitra, ny fanovana lehibe indrindra dia ireo fiovana misimisy ihany izay midika kokoa fa ny fiankinan'i Huawei amin'ny Android dia ny famindrana ny rafitra fiasan'i Huawei Harmony. Ohatra, eo amin'ny efijery an-trano, ny efijery EMUI splash mbola miteny hoe "Powered by Android", fa tsy mampiasa ny logo Android maintso intsony izy.
Ny fiovana hafa dia ny teny amin'ny haavon'ny patch patch, izay milaza tsotra hoe "Security patch level", manala ny teny hoe "Android".
Fihetsiketsehana an'habakabaka vaovao nampidirina tao amin'ny andian-dahatsoratra Huawei Mate 40 no nanatona ny P30 tamin'ity fanavaozana ity. Inona koa, misy lohahevitra EMUI vaovao antsoina hoe 'Starry Night'. [Mamporisika anao izahay: Ireo telefaona Honor dia hanohy handray fanavaozam-baovao taorian'ny namarotan'i Huawei]
Ny fanavaozana dia miaraka amin'ny kinova 11.0.0.151 ary hipetraka eo amin'ny 1.1 GB fitehirizana. Miorina amin'ny fivoaran'ny fandraràn'ny Huawei any Etazonia sy ny tsy fahafahany mahazo fahazoan-dàlana amin'ny serivisy Google, EMUI 11 no ho andiany farany an'ny 'Android' ho an'ny smartphone Huawei ary ny fandefasana voalohany ny Harmony OS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Huawei P40, P40 Pro ary Mate 30 Pro dia mahazo vaovao farany EMUI 11
Ireto no fiasa lehibe tokony ho fantatrao momba ny Exynos 1080 [+ Video]